Ifulethi Elifudumele eduze neziphethu ze-Thermal - I-Airbnb
Ifulethi Elifudumele eduze neziphethu ze-Thermal
Topusko, Sisačko-moslavačka županija, i-Croatia
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Mario
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Mario izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ifulethi elithokomele nelivulekile lise-Topusko, idolobha elincane elingamakhilomitha angu-75 ukusuka edolobheni elikhulu i-Zagreb. Ifulethi litholakala ku-800 m ukusuka enkabeni kanye namachibi ashisayo. I-Topusko yaziwa ngeziphethu zayo ezishisayo okungenye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni.
Ifulethi le-38 m2 lisha sha futhi linakho konke okudingekayo ngo-2016. Ifulethi linekamelo elikhulu elinomabonakude, umbhede ontofontofo kanye newodrophu evulekile. Ikhishi lisesimweni sesimanje kakhulu ngohhavini, i-microwave, ifriji nazo zonke ezinye izinto ozidingayo ukuze ulungiselele ukudla okumnandi.
20 m ukusuka efulethini kukhona ibhange lomfula lapho ungagijima khona futhi wenze imidlalo. Uma uthanda ukuhamba ngebhayisikili sinemizila yamabhayisikili emihlanu ukuze ukwazi ukuhlola zonke izindawo zokuvakashelwa.
Ikhaya lethu liseduze nenkaba yedolobha, ekupheleni komgwaqo i-Vrwageninska cesta. Ngaphambi kwendlu kunendawo enkulu yokupaka kanye negalaji ukuze ushiye imoto yakho futhi ujabulele imvelo enhle.
Uma ungathanda ukuhlola i-Topusko noma enye indawo yokuvakashelwa vele usibuze, siyazi izindawo ezinhle ongazivakashela.
Izilimi: English, Deutsch, Italiano, Русский, Español